Berri ugu dambayn shaki ayaan ka bixi doonnaa. Berri, Maarso 21, Apple wuxuu soo bandhigi doonaa iPhone 5SE, iPad Air 3 ama iPad Pro Mini. Cusbooneysiinta qaar ayaa sidoo kale laga filayaa Mac-yada waxaan sidoo kale arki karnaa xarigyo dheeri ah oo loogu talagalay Apple Watch. Berri nuxurka ayaa bilaabmi doona 18:XNUMX pm PDT, iyo ka Actualiad iPad waxaad si toos ah ula socon kartaa live, maadaama aan si dhakhso leh kaagala socodsiinayno akoonkeena Twitter-ka iyo baloogga, halkaas oo aan ku daabici doonno dhammaan sawirada iyo wararka la soo bandhigay.
Toddobaadkan waxaan awoodnay inaan xaqiijino in iPhone SE noqon doono ku dhowaad bilic ahaan la mid ah iPhone 5, ugu yaraan sida ku xusan daboolka laga helay dhowr bog halkaas oo laga helo inay si fiican ugu habboon yihiin qaabka 4-inji ah. Marka laga hadlayo iPad Air 3, oo loo badinayo in loogu yeeri doono iPad Mini Pro maadaama ay ficil ahaan leedahay astaamo isku mid ah nooca 12,9-inji ah, Waxay ku imaan doontaa qaabkeeda aasaasiga ah oo leh 32 GB iyo qiimo 100 euro ka qaalisan marka loo eego qaabka hadda jira ee la barbardhigi karo, iPad Air 2.
Waxaan ka hadli doonnaa jiilka afraad ee Apple TV ee toddobaadkan helay kan cusub iyo ciyaar la sugayay Sonic The Hedgehog, iyada oo aan haddaba ugu raaxeysan karno qaab shaashadda telefishankayaga. Ixtiraam JAILBREAK qalabkan, taas oo sida uu sheegayo Pangu ay ahayd inay soo bandhigaan toddobaadkan, jimcihii la soo dhaafay waxay shaaciyeen inaysan noqon karin taasna waxay u badan tahay inay sii deyn doonaan toddobaadkan. By the way, haddii aad rabto inaad la socoto dhacdada Apple TV twaxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo barnaamijka cusub ee Apple ayaa loo sii daayay qalabkan.
Steve Wozniak ma uusan awoodin inuu ka tago fursadda in hadda xiisaha ay diiradda saareyso Apple si ay u sheegato in "Apple wixii hadda ka dambeeyay ay ahayd."
Saxiix si aad ula socoto qodobka muhiimka ah ee Apple bisha Maarso 21keeda